यो सिड्नी, समुन्द्र र सुन्दरी - Katuwal
१६ चैत्र २०७२, मंगलवार ००:०९	5,126 पटक-पढिएको
लामो समयको प्रयास र यात्रा पछि पनि नेपालले विकास र राजनीतिक स्थिरता पाउन नसक्नुको एक मात्र कारण छिमेक हो भन्ने पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ। आम नेपालीको मनमा गढेको कुरा पनि यहि हो यदी हाम्रो भूगोलले कतै कुनै कुनोबाट मात्र भएपनि समुन्द्र छोएको भए यतिखेर न हामी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको विरोधमा आगो बालिरहेका हुन्थ्यौं न त यतिखेर बानेश्वरमा संविधानसभाको नाममा मुलुककै ठूूलो व्यवसायिक हल अनुत्पादक रुपमा थन्किरहेको हुन्थ्यो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राट्रिय एकता अभियानले झण्डै नेपालको सिमाना बंगालको खाडी सम्म पु¥याइ सकेको थियो। हाम्रोलागि समुन्द्र सम्मको पहुँच सहज नहुनु राजनीतिक र विकासको अवरोधकका रुपमा उभिएको छ किनकी समुन्द्र सम्मको पहुँका बीच भारत खडा छ। नत्र विकास र प्रजातन्त्रका हिमायती विपी कोइराला जस्तो जननेता र महेन्द्र जस्तो विकास प्रति प्रतिबद्ध राजा पाउँदा नेपालले विकासको मामलामा निक्कै ठूलो फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो।
सिडनीको क्रोनोला वीचमा सेल्फी खिचिरहेकी सुन्दरी।
सायद समुन्द्रको निलो पानीको अनुभव गर्न नपाएकाले पनि हुन सक्छ नेपालमा प्रजातन्त्रको निलो रंगले पनि आम मानिसको जीवनमा रहेको फुस्रोपन हटाउन सकेन। विभिन्न वाद र तन्त्रको अभ्यासमा अन्र्तराष्ट्रिय प्रयोगशाला बन्यो देश र हामी नेपाली गिनीपीग बनिरहेका छौं। नेपालको यस्तो कटु यथार्थबाट बाहिर निस्केर आफ्नो भविष्य बनाउने आशा राख्नेहरुका लागि आशा र समृद्धीको स्वप्न नगरी अष्ट्रेलिया भने आफैमा एउटा ठूलो टापु हो। यस अर्थमा कि यो समुन्द्रले घेरिएको छ। हाम्रा लागि त यो सपना र अवसरले घेरिएको देश जस्तो लाग्छ। त्यसैले त कालकुट समान लाखौंको ऋणपान गरेर ओइरिइरहेका छन् नेपाली। अनि सिड्नी र मेलबर्नका सडकमा तातो घामको वेवास्ता गर्दै काम र मामको जोहोमा जुटिरहेका छन्।
अष्ट्रेलियाको प्रमुख शहर र व्यवसायको केन्द्र अनि नेपाली सपनाले अवतरण पाउने शहर सिड्नीका सडकको कथा पनि त्यही हो। नेपाली सपनाहरु सहज रुपमा अवतरण हुन्छन् अनि जहाजको लामो यात्राले दिएको तनाव नसकिँदै बसाइँ, काम अनि विश्वविद्यालय, क्याम्पसका शूल्कहरुले दिने तनाव सुरु हुन्छ। सम्पन्नता र प्रजातन्त्र झल्काउने सडकसँगै सपनाहरु ट्राफिक छलेर अगाडी बढ्नछन्। सपना र अर्थतन्त्रको मेल गराउने चक्करमा विश्वविद्यालय, क्याम्पसका एसाइनमेन्टले पनि कम तनाब गराउँदैनन्। सबै तनाबहरु मेटाउने एउटै ठाउँ अनि उपाय हुन्छ समुन्द्र। पृथ्वी र चराचर जगतको विसर्जन समेट्ने समुन्द्र शान्त बनाउँछ तन मनलाई। सायद त्यसैले होला धेरै तनाव र दबाब सहन नसक्ने (नेपालीको तुलनामा, नेपालीलाई दुख र तनाबमा पनि हाँस्न सक्ने जातीका रुपमा लिइन्छ) अंग्रेजहरु शरिरमा न्यूनतम बस्त्र लगाएर समुन्द्रको किनारमा लम्पसार पुग्न पुग्छन्। वीच भनेर चिनिने समुन्द्रका किनाराहरु साँच्चै मानिसलाई तरंगको माध्यमबाट शान्त बनाउँछन्। मानसिक शान्ती दिन्छन् अनि शरिरलाई चुस्ती र ताजगी। साँच्चै यस्तो लाग्छ यी समुन्द्रका किनाराहरु मानिसका दुखलाई किनारा लगाएको अनुभूति गर्नका लागि नै सजाइएका हुन्।
अष्ट्रेलियाकै आकर्षण, सिडनी ओपेरा हाउस।
नेपाली त्यसमा पनि मध्यमवर्गको मनमा बसेको सिड्नीको अभिन्न अंगहरु हुन यहाँका सामुन्दी किनारा। पर्यटनको महत्वपूर्ण आकर्षण अनि जिवनकै अभिन्न अंग। जहाँ यहाँका हरेक मानिस स्वतन्त्र र सुरक्षित महशुस गरेर निक्कै कम बस्त्रले लाज ढाकेर प्राकृतिक रुपमा पुग्न अनि समुन्द्रको छाल सँगै आफूलाई बगाउने प्रयास गर्छन्। सायद त्यही प्रयासमा उनीहरुको तनाव पनि बग्छ। समुन्द्रबाट निस्केका हरेक सुन्दरी र सुन्दर(ब्यूटीफूल र ह्याण्डसम)हरु तनाव रहित देखिन्छन्।
सिड्नी अवतरण गरेका नेपाली युवाका लागि समुन्द्रको यस्ता किनाराहरु रोमान्चक र मनोरञ्जनात्मक मात्र हुँदैन। अरु पनि केही थप हुन्छ, जो उसले नेपालमा देख्न र अनुभव गर्न पाएको हुँदैन। जसको अनुभवका लागि काठमाडौंका धनाढ्य र सम्पन्नहरु थाइल्याण्डको पताया पुग्छन्। समुन्द्र र सुन्दरीहरुको छालसँगको गतिविधि अनि बालुवाको सुताइ र मन्द मन्द हावा परमानन्द भै गो। सायद सामुन्द्री किनारा मानिसमा मादकता पनि भरिदिन्छ, त्यसैले होला धेरैले हनिमुन गन्तव्य पनि बनाउँछन् यसलाई। त्यो कुजी पनि हुन सक्छ, मेन्ली वा बोन्डी।
कुजी वीचको वालुवे मैदानमा पढिरहेकी एक युवती।
नेपाली मात्र होइन एशियाका धेरै देशका निवासीका लागि सिड्नी एउटा सम्पन्नताको प्रतिक र स्वप्न नगरी हो। यहाँको ओपेरा हाउसको पँखेटा आकार धेरैको सपना र भविष्यको आकारको प्रतिरुप बनिरहेको हुन्छ। जसले मंगोलिया देखी चिन र कम्बोडियाका युवालाई सिड्नी अवतरण गराउँछ। छोटा पहिरन र खुलेको सुन्दरताले चिन, जापान, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओसका युवती जिउँदा बार्बी लाग्छन्। तीनै बार्बीका सुन्दरताका बीचबाट सिड्नीमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएर परिवार बसाउने सपना पार हुन्छ। सुन्दरी र सपनाका साथ समुन्द्रको यात्रा कम रोमान्चक चैं हुँदैन। सिड्नीमा अवतरण हुने नेपाली युवाले अनुभव गर्ने मादकता पूर्ण अनुभव हो यो।
सिड्नी अवतरण भइसकेर यहाँको वातावरण बुझ्न र काम खोज्नमा जुट्ने धेरै युवा यस्ता समुन्द्रका किनारामा पुगेकै हुन्छन्। हुन पनि सिड्नीमा काम पाउने सम्भावना धेरै भएका ठाउँहरु नै यिनै हुन्। जुन सम्भावनाले अष्ट्रेलिया हान्निएको नेपाली युवाको सपनामा रंग भर्छ। साथै सुन्दरी सुन्दरतालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पनि सिड्नी समुन्द्र।
अघिल्लो यूनि वा कोर्ष चेन्ज गर्ने सोच्दैहुनहुन्छ?
पछिल्लो अष्ट्रेलिया प्रोसेस गर्न कुन कन्सल्टेन्सी ठीक?
२३ बैशाख २०७३, बिहीबार १४:२९